Iindaba -Izizathu kunye nezisombululo zokuphambuka kokuhamba kwabalandeli bokulwa umhlwa
Izizathu kunye nezisombululo zokunxaxha kwe fan fan yokulwa umhlwa
Ukuhamba kokuphambuka kwe-anti-corrosion fan kuya kubangela ukuphambuka kwerhasi ehanjisiweyo, eya kuthi ichaphazele ngokukuko ukusebenza kwe fan. Siyintoni isizathu kwaye ungayisombulula njani? Izizathu kunye nezisombululo zokuphambuka kwinqanaba lokuhamba kwenqanaba lokulwa nomhlwa:
1. Izizathu zokutenxa kumgangatho wokuhamba:
(1) Kusenokwenzeka ukuba elona xabiso lokuxhathisa kwenethiwekhi yombhobho lahluke kakhulu kwixabiso elibaliweyo. Ukuba elona xabiso lenethiwekhi yombhobho uphawu lomlinganiso K lingaphantsi kwexabiso elibaliweyo, ukuhamba kuya kunyuka, kwaye ukuba elona xabiso le-K likhulu kunexabiso elibaliweyo, ukuhamba kuya kuncipha.
(2) Xa ukhetha ifeni, ifuthe lokuphambuka koxinzelelo kumatshini wokulwa umhlwa awuthathelwa ngqalelo ngokupheleleyo. Xa olona xinzelelo lupheleleyo kukuphambuka okuhle, ukuhamba kuya kunyuka, kwaye xa uxinzelelo olupheleleyo kukuphambuka okungalunganga, ukuhamba kuya kuncipha.
Okwesibini, isisombululo sokuphambuka kokuhamba komqhubi wokulwa nokubola:
(1) Faka i-anti-corrosion fan ngoxinzelelo oluphezulu okanye olusezantsi.
(2) Yomeleza uhlengahlengiso lokuhamba kwaye usebenzise isixhobo sokurhawuzelela ukulungisa ukuhamba, njengokuhlengahlengisa ivalve yomoya kunye nomnyango wokuhlengahlengisa.
(3) Guqula isantya se-impeller se-anti-corrosion fan.
(4) Guqula ukuxhathisa kothungelwano lombhobho kwaye uhlengahlengise ukuhamba ukwenza ukuhamba kufaneleke ngakumbi kwiimfuno zomsebenzi.
Oku kungasentla zizizathu kunye nezisombululo zokutenxa kulungelelwaniso lokulwa nomhlwa. Xa ingxaki isenzeka, ungakhangela la manqaku angasentla kwaye uthathe amanyathelo ahambelanayo emva kokufumana unobangela wokuphepha ukuphambuka kwe fan ekuchaphazeleni ukusebenza kwesiqhelo komsebenzi.
Ixesha Post: Sep-20-2019
Ifeni yecandelo leCentrifugal, Inlet engatshatanga yeCentrifugal Fan, Fume Isitshisi, Uxinzelelo oluphezulu lweCentrifugal Fan, Ukukhupha iFan, Umjelo weRadial Blade Centrifugal Fan,